Saxafiyiinta Muqdisho iyo dad kala duwan oo ka qayb galay Aaska Marxuum Timacade oo geeryooday – Radio Daljir
Saxafiyiinta Muqdisho iyo dad kala duwan oo ka qayb galay Aaska Marxuum Timacade oo geeryooday
Oktoobar 27, 2013 3:33 b 0
Muqdisho, October 27, 2013 – Qubuuraha ku yaala gudaha Cisbitalka Madiina ee magalaada Muqdisho ayaa maanta lagu aasay Marxuum Maxamed Maxamuud Timacade oo ahaa saxafiyiinta Soomaalida ee ka howl-gala Muqdisho, waxaa uu weriyuhu u geeryooday dhaawac soo gaaray toddobaadkii hore.
Goor xalay fiidkii ah ayaa weriye Maxamed Maxamuud Timacade uu ku naf baxay cisbitalka Madiina oo lagu dabiibayey tan iyo toddobaadkii hore, markii ay kooxo hubaysan ku dhufteen ilaa lix xabo xili uu ka soo baxay gurigiisa oo ku yaala degmada Wadajir.
Koox weriyaal ah oo uu ku jiro maamulka Tv-ga Universal oo Timacade ka tirsanaa iyo waalidiinta weriyaha geeryooday ayaa ka qayb-galay aaska marxuumka, lama oga ilaa hadda cida rasmi ahaan uga dambaysay dilka Maxamed Maxamuud Timacade.
Tan iyo horaantii sanadkan weriye Maxamed Maxamuud waxaa uu noqonayaa saxafigii shannaad ee lagu? dilo gudaha dalka Soomaaliya, Qaramada midoobey ayaa horay u sheegtay in Soomaaliya ay safka hore kaga jirto meelaha ugu khatarta badan ee weriyaashu ku shaqeeyaan.
Maxkamadaha caddaaladda Soomaaliland oo lagu eedeyey in ay hab musuqmaasuq ah adeegsadaan